Banyere Anyị - Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd.
Enweghị okwukwe na ụlọ ọrụ dị ka enweghị okwukwe na ụmụ mmadụ. O siri ike nweta nnukwu ihe ma nweta ihe ịga nke ọma. Ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa atụmatụ ma ọ bụ nhazigharị nhazi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbanwe niile na-adabere na nke nkịtị, nkwenkwe doro anya na usoro ọdịbendị. N'ezie, nguzobe ma ọ bụ mgbanwe nkwenye nke ụlọ ọrụ na-ebido ndị ọchụnta ego dabere na mkpa nke mgbanwe mgbanwe yana ọrụ
dị ka mgbanwe mgbanwe nke.
N'ebe a, ị nwere ike ịhụ arụmọrụ uto anyị ma mụta maka ihe ọhụụ anyị. Anyị dịkwa oke njikere ịkọrọ gị Nwee ọmarịcha ahụmịhe nke itolite ya na ndi anyi na ha n’uwa nile. N'ezie, ị ga-ahụta ọrụ anyị na ibu ọrụ. Na ịchụso azụmahịa na ndị ọrụ na-eto eto n'otu oge, anyị na-agbasochi ụzọ nke mmepe mmepe ma na-echekwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya ibu ọrụ, welfarenụ ọkụ n'obi ọha ọdịmma, na-elekọta mmadụ nloghachi.
N'ebe a, ị nwekwara ike ịhụ ọhụụ anyị. Anyị na-agbasaghị ike ịchụ "ego abụọ, atọ ọhụụ, ise, tillion "Ebumnobi ebumnuche, ọ bụghị naanị iji gbalịsie ike inweta mgbanwe na-aga n'ihu na mmelite nke akụ na ụba China n'okpuru ọhụụ ọhụrụ, kamakwa ịkekọrịta ohere ha na ibe ha zuru ụwa ọnụ, Zụkọta ọnụ.
Uru sitere na imepụta! Anyị na-akpọ gị òkù ka ị kee ọdịnihu ọnụ!
Gbado anya na mmepe nke nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi na nchekwa na gburugburu ebe obibi ma mepụta uru maka ndị niile nwere aka.
Ebuli oyiyi nke China mgbapụta & usoro ụlọ ọrụ, ịbụ onye na-adigide mmepe ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ a.
Jiri OZI na-azụ ahịa, Na-agbaso ihe ịga nke ọma na ZURU, merie mmeri na arụmọrụ, Gaa na omume ziri ezi.
A ọdụm oyiyi na agwa nke ịnụ ọkụ n'obi, mmesapụ aka, nchekwube na oké ọchịchọ na-kere dị ka mascot dabeere na zodiac akwụkwọ banyere Leadrive.
Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. Emi odude ke Taizhou-ihe energetic ku n'aka obodo maka akụ na ụba onwe ya na mpaghara Zhejiang, na ịdabere na nnukwu akụ na ụba gburugburu nke Yangtze River Delta, Zhejiang Leadrive Electric Motor Co., Ltd. (hereinfter akpọrọ "tripow moto") nwere ọnọdụ gburugburu ebe obibi ka mma. ọdụ ụgbọ elu Huangyan ịbụ naanị kilomita 2 site na ọdụ ụgbọ mmiri Haimen nke dị kilomita 10, ụlọ ọrụ ahụ enwe adaba ala-mmiri- ikuku -na-ebufe ya site na njikwa ohuru otu, modernized management usoro, elu-edu mkpara, consummate n'ichepụta akụrụngwa, zuru ule akụrụngwa, ike oru ike, a pụrụ ịdabere na ngwaahịa quality, na-atọkwa Manufuing usoro, zuru okè mma usoro, elu R&D ikike na ọkachamara ahịa otu, Leadrive MOTOR aghọwo a na-eto eto kpakpando na China moto ụlọ ọrụ. Agbasawo ahịa ya na mpaghara 20 na obodo nile dị na mba ahụ. Ya akara echiche a masịrị onye ọ bụla abụrụla nhọrọ kacha mma ndị cusom nwere ma nwee aha ọma n'etiti ndị ọrụ.
Leadrive motor bụ ọkachamara na nrụpụta, nyocha na ire ahịa dị iche iche nke moto. Ngwaahịa ya gụnyere usoro dị iche iche nke 3-ph asynchronous Motors suchas Y, YE2, YE3, YD, YEJ, YVP na moto ndị ọzọ pụrụ iche ewepụtara. N'ịnabata ụdị akwa mba ya na ọnụego ike ya na ịrị elu ya na IEC guzobere ya, ngwaahịa ya nwere uru gụnyere arụmọrụ dị elu, nnukwu mbido amalite, obere mkpọtụ mkpọtụ dị ala, na ntụkwasị obi dị elu. Enyochala ngwaahịa iji soro EC CONFORMITY maka EU mba na e CCC na CQC gbaara. Companylọ ọrụ ahụ enwetawo mmekọrịta IS09001 ogo usoro kwekọrọ. Leadrive moto na-eme onwe ya ka provied kachasị ngwọta maka ọrụ na ulo oru na eletriki ngwa site ịkwa akwa-akara pụrụ iche ahaziri moto.
Innovation na iguzosi ike n'ezi ihe bụ ụkpụrụ anyị. Mgbanwe na mgbanwe bụ uru anyị. Ebumnuche anyị ịnọchite anya ndị emere na China na ngalaba eletriki eletriki n'ụwa niile. Nọgide na echiche nke "iji mesoo ndị ahịa iguzosi ike n'ezi ihe na iji merie ahịa na mma" na izute mgbe - na-agbanwe agbanwe choro nke ndị ahịa ma n'ụlọ na aborad, anyị raara nye creat "Leadrive moto" ika na-eme ka ọ mara na China nakwa n'ụwa. Site na iguzosi ike n'ezi ihe na ọgụgụ isi anyị, anyị na-atụ anya ọdịnihu dị mma ọnụ na gị.